Sénagal: raashinka siilka - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Sénagal: cuntooyinka dabada
Waxyaabaha lagu xoojinayo "adkeynta hoosta haweenka" ayaa ah dhammaan xanaaqa ku yaal Senegal. Waxay soo iibsadeen youtube, waxay ku iibsadaan internetka iyo suuqyada. Badanaa waxtar la'aan, mararka qaarkood halis ah, waxay ka welwelaan dhakhaatiirta. (Qoraalka iyo sawirada Victor CASTANET ee Dakar)
Taleefoon gacanta ku jira, buugii dalbashada ee kale, Maya wuxuu albaabka u furayaa u keenaha oo wuxuu siiyaa bac uu ku buuxiyo "plaisirs": Jilicsanaan, midab taksi ah Kamasutra, oo ah giraan lagu riixo oo ah nooca Dorcel. Iyo, dabcan, jeel siilka-siilka dumarka ah "Marwalba Virgin", mid ka mid ah alaabta calaamadda. Salaadda jimcaha ayaa ku dhammaatay in Diamalaye, waqooyiga waqooyiga Dakar, ganacsiguna si buuxda ayuu u socdaa. Maya ma qadarin amarada la helay tan iyo subixii: "Dadku waxay tagaan dhamaadka todobaadka. Khamiista iyo Jimcaha had iyo jeer waa waalan! " Dhaqanka Senegalese dhaqankeeda, iyada oo codkeeda xasiloon iyo qaabkeedii yaraa, qareenka hore ee 27 ayaa waxoogaa yar ku sameeya sawirka laga sameyn karo X dhexeeya.
Hase yeeshee, waxay ahayd sanad iyo badh kaab markii ay bixiso alaabada Dakar ee iibka ah. Meelaha ay ka kooban tahay kaararka, ku xigxigga walxaha aphrodisiac iyo rinjiga, waxaa jira qaybta oo dhan ka xanaaqsan halkan: alaabada lagu adkeynayo siilka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ku yaalla Senegal: dabeecada sida shea subagga lagu daboolo ukumaha, biyaha liinta ama budada alum; oo laga sameeyay dalka Shiinaha sida bararka haweenka ama kareemka "18 mar labaad". Maya waxay kugula talinaysaa macaamiisheeda inta badan faleebo nep ah, warshad degaan ah oo lagu kabo kalluunka milanka Malian: "Waxay ku siineysaa 'saameyn faaruq ah', sida haddii aadan waligaa jacayl lahayn. Waxay socotaa saacadaha 24 iyo 72. Waxaad noqon doontaa mid aad u adag in lammaanahaaga uu dhibaato kaa qabsado. Macaamiishu way waalan yihiin. "
Si aad ugu qanciso, kaliya fiiri xisaabteeda Instagram, Talooyinka Maya, oo ay ku wadaagto farriimaha ay soo dirtay macaamiisheeda: "Hadaad jeclahay! Gacan-siilka-hoosaadku waa dil! Sir wuxuu ahaa janno 15e, miyaan halkan ka akhrisanaa? "Waa sida mar kale bikrad ah. Wax jiran. Xitaa kuma soo laabanin, " mahadnaq kale.
Waxyaabaha lagu yareeyo "hoos udhaca" siilka ayaa aad ugu badan Africa Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika - Gambia, Mali, Ivory Coast, Mauritania ama Burkina Faso. Dumarku waxay bilaabaan inay iibsadaan ka dib markii ugu horaysay ee ay rajo ka qabaan in ay sii wataan riyooyinkooda. Dalka Senegal, waa dhaqan hore. Hooyooyinku waxay xitaa u gudbin karaan cuntooyinka mucjisada ah ee ay ubadkooda. Hase yeeshee, xiriirrada bulshada, astaamaha ayaa kor u kacay oo ka welwelaya bulshada caafimaadka. Fiidiyowyada waxaa lagu arkay dhowr boqolaal kumanaan jeer ah, youtube waxay bixiyaan taladooda "Mar kale noqo gabadh bikrad ah" iyada oo aan lahayn xirfad. Alaabooyinka la geliyey siilka ayaa badanaaba aan waxtar lahayn, mararka qaarkood halis ah. Dhakhaatiirta dumarka Rokhaya Thiam Ba, oo ah tababarkii hore ee cusbitaallada Paris, oo ku yaal Dakar muddo shan iyo toban sano ah, waxay sharraxaysaa: "Kuwani waa badeecooyin qalajinaya xubinta taranka haweenka. Waxay ka dhigtaa mid aad u adag, sidaas darteed waxay dareemeysaa sida loo adkeeyay. Laakiin waa madaxa. Oo hadday ninkeeda ka sii fiicnaato, maaha haweenka oo dhan. "
Saaxiibkiis, Dr Ibrahim Aïdibé, ayaa xaqiijiyay xaddiga dhibaatada. Maalin kasta, ugu yaraan mid ka mid ah wadatashiyadiisa waxay la xiriiraan isticmaalka alaabtan. "Xitaa subag wuxuu noqon karaa mid aad u xun, ayuu ka digay. Haddii aad aad u badan tahay, waxa si buuxda u dheelitirta flanka siilka, taas oo noqonaysa mid xasaasi ah. Oo waxay sababtaa infekshanka fungal si joogto ah. Cabbirada cusbada waxay keeni kartaa gubasho daran. Waxay fuuqbaxayaan xajiinta iyo, xiriirka ka dambeeya, waa bisad. " Iyadoo ay jirto khataraha, badeecadahan ayaa iibiya si ka wanaagsan sidii hore ee kooxaha Facebook iyo dukaamada kala duwan ee suuqa Sandaga. Aïdibé, la'aanta waxbarashada galmada ee Senegal ayaa sharaxaysa guusha: "Fariimaha dadweynaha ee ku saabsan galmada waa kuwo dhif ah. Waxaa jira gaashaan sida ugu dhakhsaha badan marka aad isku daydo inaad ka hadasho iyaga. Mashruuc ka socda fasallada waxbarashada jinsiga ee dugsiga ayaa la qabtay dhowr bilood ka dib markii dibad baxyo ay sameeyeen hoggaamiye diimeed. "
"Arson ah ee seduction"
Dr. Rokhaya Thiam Ba, waa farsamooyin ballaaran oo ku aaddan xannaaneynta ku nool Senegal taasoo keenta dabeecadaha ugu khatarta badan: "Qof dumar ah oo isku dayaysa inay la tartanto xaasaska labaad waxay sameyn doontaa wax walba oo ay ku ilaalineyso siilka si ay u farxiso ninkeeda. Qofka aan weli wali wuxuu hubin doonaa in ninkeedu uusan raadsan naag kale ... " Saxafiga iyo qoriiste jinsiga Maria Diop ayaa sidoo kale diidday in ay aragto isticmaalka alaabooyinkan calaamad u ah soo gudbinta haweeneyda. "Senegalisku waxay leeyihiin fikrad ay ku magacaabaan 'boobka', taas oo sharxaysa in aan ku farxin raggeena. Waqtiga intooda badan, ma sameyn karaan sababtoo ah waxay u hoggaansamaan laakiin waxay jecel yihiin, Waxay sheegtay. Waxay leeyihiin arsenal oo dhan ee seduction: koofiyada kilyaha, fooxa, wax soo saarka siilka. Waxay wax ka qabataa iyaga. Waxay siinaysaa farxad ay ku farxaan ninkooda. "
Laakiin khibradda Dr. Rokhaya Thiam Ba ayaa muujinaya in prush lab ah waxay gari kartaa "Qaar ka mid ah haweenka kuwaas oo aan si buuxda u baahnaynin qaliinka si loo xoojiyo siilka, way ka xumahay. Waxay iigu imaanayaan ilmo sababtoo ah waxay dhibaato kala kulmaan warbixinta. " Bukaannada kale, oo ka baqaya inay kaligood noqdaan ama dib ugu noqdaan asalka, sii wadaan inay jacayl u muujiyaan xaaskooda sanado badan xitaa xanuunka. Oo waxay u xanuunsadaan sida hillaac. Si aadan u dhicin raaxada ninkooda.
Si aad u akhrido sidoo kale:
Katie Bouman, cilmi-baarayaasha dhalinyarada ah ee ka danbeeya dhuunta godka madow
Jacaylka iyo Daryeelka: maadeysiin (ma aha)
Loogu talagalay ama lid ku ah ... kintirka wax lagu baro ee SVT?
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/senegal-produits-vagin-danger-920552
U codee cayaarta kubada cagta